Joan Laporte oo ah musharax u taagan xilka barcelona oo Raba in halland lagu soo daro barcelona. Horyaalka Spain
Home Horyaalka Spain Joan Laporte oo ah musharax u taagan xilka barcelona oo Raba in...
Joan Laporte oo ah musharax u taagan xilka barcelona oo Raba in halland lagu soo daro barcelona.
Weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland ayaa lala xiriiriyay Barcelona, musharraxa madaxweynaha Joan Laporta ayaan meesha ka saarin inuu dhaqaaqo marka uu xillka qabto markale.
Barcelona ayaa laga yaabaa inay ku jirto xaalad dhaqaale si ay ugu dhaqaaqdo weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland dhamaadka xilli ciyaareedka, sida uu sheegay murashaxa madaxweynaha Joan Laporta.
Xiisaha Haaland ayaa sii kordheysa ka dib markii uu Arbacadii laba jeer shabaqa soo taabtay kulankii kooxda Dortmund 3-2 laga adkaadeen Sevilla Koobka Champions League wareega 16-ka.
Taasi waxay ka dhigtay ciyaaryahanka caalamiga ah ee Norwey inuu noqdo ciyaaryahanka ugu dhaqsaha badan si uu u gaaro labo jibaar goolasha uu dhaliyay hal koox, isagoo sidaas sameeyay kaliya 7 kulan – seddex kulan oo ka yar Roy Makaay oo u ciyaarayay Bayern Munich intii u dhaxeysay 2003 iyo 2004.
Waxa uu haatan dhaliyay labo gool seddexdii kulan ee isku xigta ee Champions League, isagoo sidoo kale labo jeer shabaqa kasoo taabtay kooxda Club Brugge.
Xiddigii hore ee Salzburg Haaland ayaa leh 18 gool 13 kulan oo uu ciyaaray guud ahaan tartamada, kaasoo ah kaliya ka yar xidiga kooxda Bayern Munich Robert Lewandowski oo ciyaarayey tan iyo bilowgii 2019-20.
Nooca gooldhalinta ayaa Haaland si xoogan ugu xirnaa kooxaha Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Juventus iyo Barcelona.
In kasta oo Barca ay halgan dhaqaale oo caan ah ka dhex jirtay cudurka faafa ee coronavirus, Laporta – oo xiriir dhow la leh wakiilka Haaland Mino Raiola – ayaan meesha ka saarin tallaabada suurtagalka ah.
“Haddii ay tahay inaan horumarinno kooxda kubbadda cagta, waxaan heystaa kaararka oo diyaar ayaan u ahay inaan ciyaaro,” ayuu yiri isagoo si toos ah uga jawaabaya xiriirradii uu la lahaa weeraryaha xidiga 20-jirka ah Sababtoo ah waaya-aragnimada iyo aqoonta aan u leeyahay dadka wax ka qaban kara xaaladahaas oo dhan.
Waxaan rabaa inaan u diro farriin daganaansho taageerayaasha Barcelona waxaan noqon doonaa mid dhaqaale ahaan mar labaad sii jiri doona Laporta waa mid ka mid ah seddexda musharrax ee u haray tartanka si uu ula wareego madaxweynaha xiga ee Barca, oo ay wehliyaan Victor Font iyo Toni Freixa.
Doorashooyinka ayaa markii hore lagu balansanaa in la qabto bishii Janaayo laakiin waxaa dib loogu dhigay 7-da Maarso sababta oo ah cudurka faafa Covid19-ka oo markale kusoo laabtay wadamo badan.
Previous articleManchester city oo markale bilaawday wadadii ay ku heli leheed lionel messi
Next articleMikel Arteta oo ka hadlay barbarihii kooxdiisa la gashay kooxda Benfica koobka Europe League.